Amabombo we-Tapered Roller Bearing, Deep Groove Ball Bearing, Pillow Block Bearing - Xinri
Senze ukuhlolwa okuqinile kwazo zonke izingxenye nokuthwala, sizama ukungabi nazinkinga zekhwalithi ezandleni zamakhasimende.Funda kabanzi
Ukuxhaswa kwamahora we-7X24 ngocingo noma ubuchwepheshe be-inthanethi mahhala. Inkonzo ye-OEM / eyenziwe ngezifiso iyamukelwa.
Ukuthengiswa okuqondile kwefektri, akukho mehluko wamanani aphakathi nendawo.Funda kabanzi
Linqing Xinri Precision Ukunikela Co., ltd
I-Linqing XINRI Precision bearing Co, Ltd.yinkampani egxile ekuthweleni i-tapered roller, i-cylindrical roller bearing, ibhola elinemigodi ejulile, i-pillow block bearing, i-wheel hub bearing kanye ne-inch non-standard product enterprices. Le nkampani inendawo ephelele engaphezu kwamamitha ayizigidi ezi-2, abasebenzi abakhona abantu abangama-500, inazo zonke izinhlobo zezinsimbi ezithuthukisa izinsimbi ezingaphezu kwamayunithi angama-360, izivivinyo zokuhlola amayunithi angaphezu kwama-240, Manje sisafuna i-ejenti yomkhiqizo wethu weXRL emhlabeni wonke, uma ngabe unentshisekelo, sicela uxhumane nathi ngqo.
IXRL isivele ithengiswa emazweni angaphezu kuka-120 emhlabeni jikelele. Kungaba ezolimo, ukukhiqizwa kwendwangu, ukumbiwa kwezimayini, ukuphrinta izinhlelo ezahlukahlukene ezikhumulweni zezindiza, ezinhlelweni zokupholisa umoya, ukuhambisa amadivayisi, ukuthumela isiteshi samandla, ithoyizi noma okokusebenza kwezokwelapha, i-Automobile, i-XRL akumele okungaphansi kwenani eliphakeme kakhulu lesigaba semakethe esiphakathi nendawo. .
Isitolo esidayisa yonke impahla Inani China China Factory Qualit Good ...
OEM Factory for China 6203 Izinga Lokushisa Eliphezulu Hig ...
China Intengo eshibhile China Miniature Ball Bearings ...
Intengo eshibhile China Hand Spinner Factory Wholesal ...
IXRL isidayise amazwe angaphezu kuka-120
Izigidi eziyi-150 +
Ukuthengiswa konyaka kwamazwe angaphezu kwamadola ayizigidi eziyi-150
Izigidi ezingama-700 +
Ikhono lokukhiqiza langaphakathi lonyaka lidlula amayunithi ayizigidi ezingama-700
Sithole iSitifiketi Sokuphathwa Kwekhwalithi.
SINGUMKhiqizi OTHWALA NGOBUCHWEPHESHE
Ijubane eliphezulu izinga lokushisa eliphakeme
Impilo yesevisi ende kulula ukuyigcina
Can kwenziwe ngezifiso
Sinikeza uhla oluphelele lwamabombo kufaka phakathi amabombo we-Tapered roller, amabombo we-Deep groove ball, ama-Pillow block bearings, ama-Cylindrical roller bearings, ama-Spherical roller bearings, ama-wheel hub bearings namanye. Futhi amabanga asuka kumabherethi amancane anobubanzi obungaphakathi obungu-20mm kuya kwamabhere amakhulu ngobubanzi obungaphandle obungu-500mm. Ngaphezu kwamabheringi ajwayelekile, siphinde sikhiqize amabhere angajwayelekile.
Ngaphezu, siphinde sibe nomkhiqizi weRussia LADA, TZA, VPZ, SPZ, VBF neKG, nabanye. Okwamanje, futhi singanikeza ngesevisi ye-OEM.
1. Zonke izinqubo ezikhiqizayo, njengokufaka, ukuvula, ukushisa ukushisa, ukugaya, ukuhlanganisa nokupakisha, sekuphelile ku-manufactory yethu. Kungakho i-XRL Bearing ingakunikeza ngokunemba kwebhola nama-roller bearings ngamanani aphansi kakhulu futhi ingahlangabezana nokulethwa ngesikhathi.
2. Njengomkhiqizi oqinisekisiwe we-ISO9001: 2000, besisungule uhlelo lokulandelela umkhiqizo. Ngaphandle kwalokho, i-XRL Co., ineqembu eliqinile lobuchwepheshe nonjiniyela waseJapan ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene ekusetshenzisweni nasekusebenziseni amabhere ethu.
3. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi: iwaranti yekhwalithi yezinyanga eziyi-12, imali ingadonswa noma ibuyiselwe imali uma kukhona inkinga yekhwalithi.
1. Sinemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme ukuthola ukuthwala imingcele ehlukahlukene yedatha nokulawula ikhwalithi yokuthwala. Noma kunini lapho amabombo kufanele aqale atholakale ukuthi ikhwalithi iyafaneleka yini futhi ukuthwala okungafaneleki kuzosuswa ngqo. Ngakho-ke singathola ukwethenjwa kwamakhasimende amakhulu, futhi siwanikeze iminyaka eminingana.
2. Sinamakhono ethu we-R & D, ukusiza amakhasimende ukuxazulula inkinga yamabheringi angajwayelekile. Futhi singashintsha uphawu lwekhasimende uqobo ngokuya ngezidingo zalo.
3. Singaqinisekisa ukuthi amanani ethu aqondakala kakhulu uma uqhathanisa namabhere ezingeni elifanayo eChina. Kungcono kuwe ukuqhathanisa amanani nekhwalithi phakathi kwabahlinzeki. Kepha wonke umuntu uyazi ukuthi awukwazi ukuthenga imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu ngentengo ephansi, kepha ukuthwala kwethu ikhwalithi engcono kakhulu uma usebenzisa inani elilinganayo.
Sesivele sisethe i-ejenti emazweni aseNingizimu Melika afana nePeru ne-Afrika amazwe afana neKenya neZambia, Manje sisafuna i-ejenti yomkhiqizo wethu weXRL emhlabeni wonke, uma ngabe unentshisekelo, sicela uxhumane nathi ngqo.